मोहम्मद सकिल अख्तर, अफ्ताव आलमका भाइ (काकाको छोरा) तथा राजपुर नगरपालिकाका मेयर
२०७६ कार्तिक २ शनिबार ०७:००:००
२७ चैत ०६४ को साँझ तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?
राजपुर स्थित घरमै थिएँ ।
कांग्रेसका पुराना नेता सेख इद्रिसको टहरोदेखि तपाईंको घर कति टाढा छ ?
एकै ठाउँमा हो । उहाँको टहरो घर र मेरो घरको साँध जोडिएको छ ।
२७ चैत ०६४ को साँझ खास के भएको हो ?
केही पनि भएको छैन । भोलिपल्ट चुनाव थियो । गाउँमा चुनावको महोल थियो । सुरक्षाकर्मी गाउँमा थिए । अरू के हुन्थ्यो !
त्यस दिन इद्रिसको टहरोमा बम विस्फोट हुँदा कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?
कहाँ विस्फोट भयो बम ? मलाई त थाहा छैन । घरमै बसेको मान्छे म । मलाई त थाहा हुनुपर्ने हो । त्यसमाथि चुनावमा गाउँभर सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए । उनीहरूलाई त थाहा हुनुपर्ने हो । त्यस दिन सुरक्षा–प्रबन्ध निकै कडा थियो । त्यस्तो वेला कसरी बम विस्फोट हुन सक्छ ?
बमको धमाका ११ किलोमिटर टाढाको गौरमा बसेका मान्छेले समेत सुनेको अहिले पनि बताउँछन् । धुवाँको मुस्लो पनि माथि आकासमा उडेको थियो रे ?
पटका पड्केको हुन सक्छ । मान्छेले त्यसैलाई बम भनिदिए । खासमा भएको केही होइन ।
धुवाँको मुस्लो कसरी उड्यो त ?
चैतको महिना । गाउँको गोठमा आगो फुकेको हुन सक्छ । धुवाँ त्यसैबाट उड्यो होला । त्यो बमकै धुवाँ थियो भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
घटनास्थलमा ओसी अख्तरको कपडा, जुत्ता भेटियो भन्ने छ नि ?
को ओसी अख्तर ? हामी त चिन्दैनौँ । फेरि त्यहाँ भेटिएको कपडा र जुत्ता ओसी अख्तरकै थियो भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? थोडी त्यो कपडा र जुत्तामा ओसी अख्तरको नाम लेखिएको थियो ? कपडा त जोसुकैको हुन सक्छ नि ।
ओसी अख्तरलाई चुनावी प्रचार त तपाईंकै दाइले ल्याएको होइन ?
चुनाव प्रचारमा उसलाई किन ल्याउनु । ऊ त अर्कैै पार्टीको मान्छे । प्रचार गर्न हामीसँगै काफी कार्यकर्ता छन् ।
अघि त ओसीलाई चिन्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो नि ?
होइन । गाउँलेले भनेको सुनेको ।
पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहलाई चिन्नुहुन्छ ?
अलिअलि चिन्छु ।
को हो त्यो मान्छे ?
गाउँको गुण्डा हो । अपहरण मुद्दामा जेलसमेत परेको मान्छे हो त्यो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रेकर्ड हेर्दा हुन्छ ।
उसलाई पनि चुनाव प्रचारमा तपाईंकै दाइले लगेको होइन र ?
त्यसको के प्रमाण छ ? मलाई त थाहा छैन । त्यस्तो गुण्डालाई हामी किन चुनाव प्रचारमा ल्याउँछौँ होला त ।
ओसी र पिन्टु २७ चैतको बम विस्फोटमा परेर घाइते भएको अनि पछि इन्जेक्सन लगाएर मारेको होइन र ?
जब कि बम नै विस्फोट भएको होइन भने उनीहरूको मृत्यु कसरी हुन्छ ?
विस्फोट भएको मात्रै होइन, इँटाभट्टामा लगेर जलाएको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी सरुहट्ठाका समसुल मियाँले त्यही भन्छन् त ?
सरुहट्ठा राजपुरबाट पाँच किलोमिटर टाढा छ ।त्यहाँको मान्छे कसरी प्रत्यक्षदर्शी हुन सक्छ ?
इँटाभट्टा लगेर १७ भन्दा धेरै जिउँदा र मृत शरीर जलाएको भन्छन् नि उनी ?
विस्फोट नै भएको छैन भने कसरी १७ जनाको मृत्यु हुन्छ ? अनि कसरी इँटाभट्टामा लगेर जलाइन्छ ? यो सब झुट हो ।
२७ चैतको राति सशस्त्र प्रहरीको गाडी स्कर्टिङ गर्दै ट्र्याक्टरको पछिपछि इँटाभट्टामा पुगेको प्रसंगचाहिँ के हो नि ?
भोलिपल्ट चुनाव थियो । चुनावका लागि सशस्त्र प्रहरीको मात्रै होइन, अन्य सुरक्षा संयन्त्रको पनि गाडी आउन सक्छ । त्यस दिन राति पनि आयो होला, के नौलो भयो र ?
त्यसो हो भने चुनाव प्रचारमा तपाईंहरूसँग हिँडेका ओसी र पिन्टु कहाँ गए त ?
उनीहरू कहाँ गए कसरी भन्न सक्छौँ हामी । टोलका गुण्डा थिए । कतै बेपत्ता भए होलान् । उनीहरूको ग्यारेन्टी हामी कसरी लिन सक्छौँ र ?
मृतक ओसीकी आमा रुक्साना खातुन, पिन्टुका बुबा श्रीनारायण सिंह र घटनाको प्रत्यक्षदर्शी समसुल मियाँले त २७ चैतमा भएको विस्फोटमा मृत्यु भएको भन्छन् त ?
कसरी त्यस्तो हुन्छ ? ती सबै झुटा हुन् । जब कि बम विस्फोट नै भएको छैन भने कसरी मृत्यु हुन्छ ?
त्यसो भए उनीहरू तपाईंहरूकोविरुद्ध किन लागे त ?
यो सबै षड्यन्त्र हो । राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न यसो गरिएको हो ।अफ्ताव आलमको लोकप्रियता सक्न यसो गरिएको हो ।
षड्यन्त्र त आफूबराबरका सँग गर्ने हो । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हैसियतले अफ्ताव आलम रुक्साना, श्रीनारायण र समसुलभन्दा निकै माथि देखिन्छन् । उनीहरूले यस्तो षड्यन्त्र गरे भनेर कसरी पत्याउने ?
उनीहरू देखिने पात्र मात्रै हुन् । उनीहरू त गोटी मात्रै हुन् । खेलाउने त अरू नै छन् ।
को होलान् त उनीहरू ?
यस विषयमा भन्न मिल्दैन । यति चाहिँ ग्यारेन्टी साथ भन्न सक्छु– दाइको लोकप्रियताबाट तर्सिएकाहरू षड्यन्त्रमा संलग्न छन् । अहिले यो, ऊ किन भन्नुप-यो र ?
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, इन्सेक र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिवेदनमा पनि त्यस दिन इद्रिसको टहरोमा बम विस्फोट नै भएको उल्लेख छ नि ?
त्यो सबै गलत हो । बम विस्फोट भएकै हो भने सँगै रहेको मेरो घरमा क्षति पुग्नुपर्ने हो । १७ भन्दा धेरैको मृत्यु भएको भए त्यत्रो विस्फोटमा वरिपरिको घरमा क्षति पुग्दैन ? त्यस्तो प्रमाण भेटाउनुभएको छ ? यो सबै षड्यन्त्र हो ।
बम विस्फोट नभएको भए टहराको छानो, भित्ता कसरी रातारात परिवर्तन गरियो ? प्रतिवेदनमा त त्यही उल्लेख छ नि ।
विस्फोट नै भएको छैन भने कसरी टहराको छानो र भित्ता परिवर्तन हुन्छ । त्यो पहिले जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सबै झुट हो ।
त्यसमा राजनीतिक षड्यन्त्र छ । इन्सेक, आयोग र बार पनि आलमविरुद्धकै षड्यन्त्रमा लागे होलान् त ? यसो गर्दा उनीहरूलाई के लाभ होला र ?
षड्यन्त्र भएकै हो । त्यसैले प्रतिवेदन बन्यो । यसमा उनीहरूलाई के लाभ छ त्यो म कसरी भनौँ ?
इँटाभट्टाचाहिँ किन नष्ट गरियो नि ?
पुरानो भयो । ढल्यो । यसमा नयाँ के नै छ र ?
प्रहरी–प्रशासनलाई तपाईंहरूले प्रभावित पार्दा मृतकका आफन्तको जाहेरी नै लिएनन् भन्ने छ नि ?
नेपालको प्रहरीलाई हामी खरिद गर्न सक्छौँ ? यो त हुनै नसक्ने कुरो हो । जाहेरी किन लिनुभएन त्यो हामी कसरी भनौँ ?
त्यसो भए जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र पुनरावेदनले खारेज गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले किन उल्टायो त ?
यसमा यस्तो छ– उहाँहरूले जाहेरी दिनुभयो, मुद्दा अदालतमा पुग्यो, तर प्रमाण नपुगेर खारेज भयो । प्रमाण पुगेको भए त मुद्दा चलिहाल्थ्यो नि । जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र पुनरावेदनले खारेज ग-यो, ठीक ग-यो । अब सर्वोच्चले किन उल्टायो, के भन्न सकिन्छ र ? मलाई शंका छ, सर्वोच्च प्रभावित भयो ।
त्यसो भए सर्वोच्चको आदेश गलत हो ?
गलत हो । यसमा हामीलाई शंका छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि त अफ्ताव आलम फरार अभियुक्त हो । यसविरुद्ध तपाईंहरूले कानुनी उपचार किन खोज्नुभएन त ?
अफ्ताव आलम पूर्वमन्त्री मात्रै होइन, वहालवाला सांसद पनि हो । उहाँको सुरक्षाका लागि राज्यले सुरक्षाकर्मी खटाएको छ । चौबिसै घन्टा सुरक्षाकर्मीको साथ रहने मान्छे कसरी फरार हुन सक्छ ?
बम विस्फोटमा संलग्न भएको अरोप छ त ?
यो गलत हो ।
त्यसो भए अफ्तावलाई प्रहरीले अहिले किन पक्राउ गरेको हो त ?
मुलुकमा दुईतिहाइको सरकार छ । अफ्तावको लोकप्रियता सक्न योभन्दा उत्तम मौका उनीहरूले देखेनन् होला । त्यही भएर बम विस्फोटमा संलग्न भएको आरोप लगाए । पक्राउ परेको त्यही कारण हुन सक्छ ।
अरोप लाग्दैमा अपराध प्रमाणित हुने त होइन । अहिले अभियुक्त मात्रै हो । अनुसन्धानपछि सफाइ पनि पाउन सक्नुहुन्छ । तर, अहिले अनुसन्धानलाई सघाउन तयार हुनुहुन्छ त ?
त्यही भएर हामी चुप लागेर बसेको हो । हामी पनि चाहन्छौँ अनुसन्धान होस् । त्यसपछि उहाँले सफाइ पाउनुहुन्छ । तर, अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ । षड्यन्त्र मिसियो भने हाम्रो विरोध रहन्छ । अनुसन्धानमा सघाउन हामी तयार छौँ । उहाँ पनि तयार हुनुहुन्छ ।
#मोहम्मद सकिल अख्तर # अफ्ताव आलम
आलममाथि थप दुई मुद्दा दर्ता, अनुसन्धानको लागि पाँच दिन म्याद थप
विस्फोटका घाइतेलाई सुई लगाई बेहोस बनाएर इँटाभट्टामा जिउँदै जलाइएको थियो
इँटाभट्टामा जलाएर पाँचजनाको हत्या अभियोगमा सांसद आलम पक्राउ